Wararkii ugu dambeeyay qarax maanta ka dhacay gudaha Suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wararkii ugu dambeeyay qarax maanta ka dhacay gudaha Suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho
Qarax aad u xoogan islamarkaana geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa maanta ka dhacay banaanka hore ee maqaayad ku taalo gudaha Suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho.
Qaraxaasi ayaa inta la xaqiijiyay ku geeriyootay ilaa 3 qof oo laba ka mid ah ay yihiin hooyo iyo gabar, halka qofka kalena uu ahaa askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya.
Sidoo kale ilaa 4 qof kale ayaa la sheegay inuu dhaawac kasoo gaaray qaraxaasi, waxaana goobta uu qaraxa ka dhacay soo gaaray ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa nabad-sugidda qaranka oo halkaasi baaritaano ka sameeyay.
Dhinaca kale, afhayeenka wasaaradda amniga C/kaamil Macalin Shukri oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in labada qof ee dhintay ay kala ahaayeen gabar iyo hooyadeed, halka qofka kalena uu tilmaamay inuu ahaa askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya.
“Waxaa gudaha suuqa Bakaaraha gaar ahaan qeybta daawada lagu iibiyo ka dhacay qarax aan u maleynayno inuu yahay miino, waxaana wararka aan helnay ay sheegayaan inay ku dhinteen gabar iyo hooyadeed iyo askari ka tirsan ciidanka dowladda” Sidaas waxaa yiri afhayeenka wasaaradda amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya C/kaamil Macalin Shukri.
Ilaa iyo haatan ma jirto cid qaraxaasi loo soo qabtay, wuxuuna qaraxaan kusoo beegmayaa xilli magaalada Muqdisho uu maanta ka furmay shirka madasha wadatashiga qaran, kaas oo looga hadlaayo dhameystirka arrimaha doorashooyinka dalka ka dhici doonno dhamaadka sanadkaan.